Ahoana ny fampiasana fanabeazana tsara amin'ny alika | Tontolo alika
Raha ny amin'ny fanabeazana ny alika, dia mazàna isika hanao azy io amin'ny fomba ratsy saika tsy fantatsika. Mora kokoa ho antsika ny manondro ny zavatra tsy nety nataony toy izay ny tsy mamporisika azy sy manome valisoa azy amin'izay tsara nataony, mba hanana fanatrehany bebe kokoa ity farany. ny fanabeazana tsara Voaporofo fa tena azo itokisana sy mandaitra izy io, ary manampy ny fifamatorana eo amin'ny alika sy ny tompony koa ho lehibe kokoa.
Raha mandany ny andro isika manitsy na manasazy Azo inoana fa hisoroka toe-javatra maro ilay alika, saingy tsy hanana fahatokisana ampy azy isika hanao zavatra satria fantany fa salama izy na hahazo valisoa manentana azy. Ireto karazam-pampianarana roa ireto dia nampiasaina rehefa mandeha ny fotoana, fa ny fanabeazana tsara dia tsy isalasalana fa mamorona alika mahay mandanjalanja kokoa izay matoky olona.
Ny fanabeazana ny alika amin'ny lafy tsara dia toa valio izy rehefa manao izay tiantsika hatao. Tsara ny manomboka mampihatra izany amin'ny toerana tsy misy fanelingelenana anao. Tsy afaka manome tsiny anao izahay noho ny tsy nipoiranao rehefa niantso anao tany ivelan'ny toerana feno fofona sy biby hafa izahay, rehefa tsy nanao ilay antso izahay. Ny tokony hataonao dia ny manazatra ao an-trano ary omeo valisoa izy rehefa tonga amin'ny antsonay. Voalohany amin'ny loka, avy eo amin'ny fikolokoloana, mandra-pahatongany satria zavatra tsara ny fifandraisany amin'izany fianarana izany.
Sorohy ny sazyna tsara ihany koa, satria ny fanabeazana ratsy indraindray dia mandà fotsiny ny alika. Raha tsy tonga izy rehefa miantso azy isika, ary rehefa tonga izy dia mananatra azy noho izy tara, izy ireo dia hampifandraisin'izy ireo fotsiny fa rehefa mandeha miaraka amin'ny tompony dia hahazo anatra izy ireo, ka tsy te-hanao izany intsony izy ireo. Inona koa, mety hampifangaro azy ireo izany indraindray.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Ahoana ny fampiasana fanabeazana tsara amin'ny alika
Saluki, ny alika mpanjaka any Egypt